राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु, के गर्न पाइँदैन ? | आर्थिक अभियान
राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु, के गर्न पाइँदैन ?
वैशाख २७, काठमाडौं । मंगलवार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदैछ । मतदानअगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन ।
मौन अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्बन्धमा निगरानी राख्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको पाइएमा सुरक्षा निकायले तत्काल नियन्त्रणमा लिने आयोगले बताएको छ ।
मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न पाइँदैन । मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्नेछ ।
मदिरा विक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध
स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ अनुसार आइतवार राति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि मदिरा विक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मदिरा सेवनबाट झैझगडा तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै आयोगले मौन अवधिमा मदिराको बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यान दिंदै मंगलवार राति १२ बजेदेखि देशका सीमानाका बन्द गरिए पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान भने रोकिएको छैन । आउँदो शुक्रवार देशभर एकै चरणमा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुँदैछ । निर्वाचनका दिन आन्तरिक उडान र अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । रासस